”Iigu yeera Maxamed Farah. Mo wakhtigiisa waa dhamaaday” sidaas waxaa yiri orodyahanka Maxamed Farah
arlaadi August 15, 2017 No Comments
Orodyahanka Soomaaliyeed ee haysta dhalashada Ingiriiska una orda dalkaasi Ingiriiska ayaa sheegay in wixii hada ka dambeeya uu doonayo in loogu yeero Mohamed Farah halkii loogu yeeri lahaa Mo Farah oo ah sida uu sheegay magac la sameeyay.
” Magacagayga orodada wadooyinka waa Mohamed. Mo wakhtigiisa waa uu dhamaaday” sidaas waxaa yirir orodyahanka Maxamed Farah oo cayaarihii ugu dambeeyay ee London ku guuleystay biladaha dahabka iyo qalinka isaga oo orodadii 5000 mitir ka galay kaalinta labaad kadib markii uu kaalinta koobaad galay orodyahanka reer Itoobiya ee Mukhtaar Idiris.
Mohamed Farah ayaa ku eedeeyay qaybo ka mid ah warbaahinta inay isku dayayaan inay baa bi’iyaan guulihiisii orodada isaga oo sheegay inay eedaymo aan sal lahayn usoo jeedinayaan tababarihiisa Alberto Salazar.
Maxamed Faarax oo hada 34 sano jir ah ayaa sheegay inuu bilaabayo qaybta labaad ee orodadiisa oo ahh orodada wadooyinka isaga oo sheegay inay taariikhdu xusi doonto guulihii uu ka gaaray orodada.